စိတ်ဒုက္ခပေးနေသူကိုဖြတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်းနေလိုက်တဲ့အခါ ရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူး (၅)မျိုး
စိတ်ဒုက္ခပေးနေသူကိုဖြတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်းနေလိုက်တဲ့အခါ ရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူး (၅)မျိုး စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ Relationship မှာနေနေမယ့်အစား တစ်ယောက်တည်းနေတာက အများကြီးစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။ အဲ့ဒါကို လက်ခံတဲ့သူလည်းရှိသလို၊ တချို့တွေလည်း လက်မခံကြပါဘူး။ ဒီတော့ ဒါကိုလက်မခံတဲ့သူတွေကို ချေပဖို့ စိတ်ဆင်းရဲခံပြီး တစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွဲနေတာထက် တစ်ယောက်တည်းနေတာက ဘာလို့ ပိုကောင်းတာလဲဆိုတာကို သက်သေပြနေတဲ့အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ် နော် […]
6.6.2019 မှ 12.6.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း …..
6.6.2019 မှ 12.6.2019 အထိ တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း ….. #တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း မိမိအတွက်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဖွဲ့စည်းပုံတွေ၊သီအိုရီတွေပြောင်းလဲသင့်ပါတယ်။ meeting တွေပြုလုပ်ပြီး ပိုမိုတိုးတတ်စေမဲ့လမ်းကြောင်းကို ရှာဖွေပါ။ ဒီကာလဟာ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး လက်ရှိအနေအ ထားထက်ပိုမိုကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ staff level တောင်မှမိမိအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ် လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားများ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်နိုင်သလို နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေကိုမေးမြန်းအကြံယူသင့် တဲ့နေ့ရက်ပါပဲ။ […]
ကိုယ့်ထက် အသက်ပိုကြီးတဲ့ ”ဦး”တွေကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ချက်…ကိုယ့်ထက် အသက်ပိုကြီးတဲ့ ”ဦး”တွေကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ချက်…
ကိုယ့်ထက် အသက်ပိုကြီးတဲ့ ”ဦး”တွေကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ချက်… မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ချစ်သူ ၊ အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးတဲ့အခါ ဘယ်လိုလူမျိုးကို ရွေးသင့်လဲဆိုတာ အမြဲတမ်း စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ ။ ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦးတွေကို ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းလေးတွေကို […]
မေးစေ့ပေါ်က ကြမ်းကြမ်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို အိမ်တွင်းနည်းတွေနဲ့ ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း….
မေးစေ့ပေါ်က ကြမ်းကြမ်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို အိမ်တွင်းနည်းတွေနဲ့ ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း…. မေးစေ့ပေါ်က ဆားဝက်ခြံတွေကို အိမ်မှာပဲ အိမ်တွင်းနည်းတွေနဲ့ ဖယ်ရှားကြမယ် မေးစေ့ကို ကိုင်လိုက်ရင် ချောမွေ့ခြင်းမရှိဘဲ ကြမ်းနေတာက ဆားဝက်ခြံတွေကြောင့်ပါ။ ဒီဆားဝက်ခြံတွေက စိတ်အနှောင့်အယှက်တကယ်ပေးတယ်နော်။ ပျောက်အောင်လုပ်လည်း အဲ့ဟာတွေက ပြန်ထွက်လာတာပဲ။ ဒီအတွက် စိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ ဆားဝက်ခြံပျောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် […]
သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင်မိသားစုမှ မွေးရပ်မြေ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ထံသို့ ကားသွားရောက်လှူတန်းစဉ် ….. (၆.၆.၂၀၁၉) ApannPyay သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင်မိသားစုမှ မွေးရပ်မြေ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ထံသို့ ကားသွားရောက်လှူတန်း ခဲ့ ကြပါ တယ် …။ ကိုဝင်းကျော်ရဲ့ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်း မြင်းမူမြို့နယ် ထိန်ကန်ကျေးရွာဆိုတာ အညာဒေသမို့ […]
တာဝန်ပျက်ကွက်မှာစိုးလို့ သားလေးကို ဆေးရုံတင်နောက်ကျခဲ့ရတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ရင်နင့်စရာအဖြစ် …..
တာဝန်ပျက်ကွက်မှာစိုးလို့ သားလေးကို ဆေးရုံတင်နောက်ကျခဲ့ရတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ရင်နင့်စရာအဖြစ် ….. By Bamakhit – June 6, 201913 တချို့ကပြောကြတယ် ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာပညာရေးဝန်ထမ်းက အသက်သာဆုံးတဲ့။သူတို့အတွက်ဘာမှ နစ်နာစရာသက်ရောက်တာမရှိဘူးတဲ့။တကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားရှင် ….. ကျွန်မ အထက်တန်းပြဆရာမတစ်ယောက်မို့ ၁၀တန်းစာစစ်ပါတာမဆန်းပါဘူး ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီရက်မှာပဲ သားလေး စဝမ်းလျှောပြီးနေမကောင်းဖြစ်တယ် လူစားထိုးမရှိလို့ စာစစ်ငြင်းခွင့်မရတာကြောင့် […]